PressReader - Ilanga: 2019-01-07 - Uhlelo lokusiza abafundi
Uhlelo lokusiza abafundi
Bazokwazi ukuphucula imiphumela yabo, nabangaphasanga ubazosizakala
Ilanga - 2019-01-07 - Izindaba - MTHOBISI SITHOLE
SEKUNOHLELO olusha, olubizwa ngeFace to Face Second Chance (Ubuso noBuso), oluqhamuke noMnyango wezeMfundo eyisiSekelo ngoba ukholwa wukuthi luzonika abafundi abangaphumelelanga kumatikuletsheni ithuba lesibili.
Umqondisi wezokubhalwa kwezivivinyo eMnyangweni wezeMfundo KwaZulu-Natal, uDkt Bunny Mthembu, uthe lolu hlelo luhle ngoba ngisho umfundi isifundo angasiphasanga ngokumgculisayo, unelungelo lokusibhala kabusha.
Uthi okwehlukile ngalolu hlelo wukuthi abafundi bazobe befundiswa bukhoma emakilasini njengoba behlelelwe izikhungo ezizokwenza lokhu isifunda nesifunda, iKwaZulu-Natal yonke.
“Uma umfundi ebona ukuthi akanelisekanga ngemiphumela yakhe, angakwazi ukucela ukuba amakelwe kabusha ingakapheli le nyanga. NgeFace to Face Second Chance, silekelela laba abasadinga ukufundiswa nguthisha,” kusho uDkt Mthembu.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthi abafundi abafuna ukubhala kabusha ngoNhlangulana (June), kumele bakubhalisele lokhu kuze kube kuphela uMasingana (January).
Uthe ukubhala komfundi kuzoya ngokuthi usekulungele yini ngoba nangoZibandlela (December) kuzobe kusavumelekile - kuzoba yizigaba ezimbili enyakeni.
Utshele ILANGA ukuthi isifunda nesifunda kuhlelwe izikhungo ezisiza abafundi. Uthe bazobe bekhona othisha abafundisayo, nabafisa ukubhalisela izichibiyelo sebengafaka izicelo njengoba khona kuzoqalwa ukubhala mhla ka-2 kuNhlaba (May) kuze kuphothulwe mhla ka-14 kuNhlangulana. Imininingwane engasiza abafundi kuzona zonke izifunda zezemfundo KwaZulu-Natal, inje;-
AMAJUBA - E. Sithole: 083 944 3790, e-mail: [email protected] com HARRY GWALA - M. Memela: 072 252 7427 e-mail: Mondli. [email protected]
ILEMBE - M. Zungu: 083 944 3790 e-mail: [email protected]
KING CETSHWAYO - S. Moodley: 072 470 1285 e-mail: [email protected] kzndoe.gov.za
PINETOWN - T. Luthuli: 083 320 6520 e-mail: [email protected] com UGU - O.Maharaj: 071 687 8542 e-mail: [email protected]
EMGUNGUNDLOVU - R. Nzama: 079 260 5654 e-mail: [email protected] kzndoe.gov.za
UMKHANYAKUDE - M.Thabethe: 074 699 7245 e-mail: [email protected]
UMLAZI - P. Preethlall: 082 689 5458 e-mail: [email protected] com MZINYATHI - B. Naidoo: 084 566 2899 e-mail: Bala. [email protected]
UTHUKELA - T. Mazibuko: 083 226 6620 e-mail: [email protected] yahoo.com ZULULAND - C. Buthelezi: 082 351 3499 email: chippa. [email protected]
ISITHOMBE NGU: SIPHAMANDLA CELE
ABAFUNDI abaphase ngamalengiso KwaZulu-Natal, bebehlonishwa wumnyango wezemfundo eThekwini ngoLwesihlanu. Bathathwe neNhloko yoMnyango, uDkt Enoch Nzama, uNgqongqoshe uMthandeni Dlungwane nomqondisi wezivivinyo, uDkt Bunny Mthembu.